उपेन्द्र महतोद्धारा सरकारलाई तीन करोड ६१ लाख रुपियाँ बराबरको औषधि सहयोग
बिहीवार, मंसिर १०, २०७२ साल
काठमाडौं । फूलकुमारी मेमोरियल ट्रस्टका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले तीन करोड ६१ लाख रुपियाँ बराबरको औषधि स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । भारतीय नाकाबन्दी र मधेसमा जारी बन्द हडतालका कारण मुलुकमा..
भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध ह्वाइट हाउस अगाडि विशाल विरोध प्रर्दशन, हजारौं नेपाली सहभागी
सोमबार, मंसिर ७, २०७२ साल
वासिङटन डिसी । विभिन्न मुलुकमा बस्दै आएको प्रवासी नेपालीहरुले नेपालमा भारतले गर्दै आएको अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउस अगाडि विशाल प्रदर्शन गरेका छन्..
भारतीय नाकावन्दीको विरोधमा अष्ट्रेलिया, हङकङ, बेलायत, रुस, जर्मनीमा विशाल प्रदर्शन
आईतवार, मंसिर ६, २०७२ साल
भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध गैरआवासीय नेपालीहरुले विश्वका विभिन्न मुलुकमा एकैसाथ विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्नुका साथै त्यहाँस्थित भारतीय नियोगहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपालीहरुले अष्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन गरेका छन् । गैरआवासीय..
भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा संयुक्त राष्ट्रसंघ अगाडि प्रदर्शन, मुनलाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
बुद्धबार, मंसिर २, २०७२ साल
काठमाडौं । अमेरिकामा बस्दै आएका सयौं प्रवासी नेपालीहरुले भारतले नेपालमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्नुका साथै राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनलाई ज्ञापनपत्र..
एनआरएनए प्रमुख संरक्षकमा जीवा लामिछाने, प्रवक्तामा रन्जु थापा, अन्य पदहरुमा पनि मनोनयन
सोमबार, कार्तिक ३०, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआवसीय नेपाल संघ (एनआरएन)को प्रमुख संरक्षकमा जीवा लामिछाने सर्वसम्मत चयन भएका छन् । संघको साइबर कन्फेन्सले लामिछानेलाई प्रमुख संरक्षकमा चयन गरेको हो । यसअघि प्रमुख संरक्षकमा रामप्रताप थापा थिए..
लण्डनमा मोदी बिरुद्ध नेपालीहरुको प्रदर्शन
शुक्रबार, कार्तिक २७, २०७२ साल
काठमाडौँ। बेलायत भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधमा नेपालीहरुले बिहिबार प्रदर्शन गरेका छन् । तीन दिने भ्रमणका क्रममा हिजो लण्डनमा उत्रिएकै दिन मोदीको विरोधमा नेपालीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । बेलायतमा बस्दै..
गैरआवासीय नेपालीले मानवीय संकटमा सहयोग गर्ने, भारतको नाकाबन्दी खेदजनक
मंगलवार, कार्तिक २४, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष शेष घलेले अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा देखिएको औषधीको अभाव तथा अत्याबश्यक मानवीय सामाग्रीको परिपूर्ति गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष घलेले मंगलबार एक..
साउदी अरब । रोजगारदाता कम्पनीले आवासीय अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिदिँदा साउदी अरबको एक कम्पनीमा कार्यरत ५० नेपाली कामदार विचल्लीमा परेका छन् । साउदीको दमाममा रहेको मोहम्मद अलमोजिक ग्रुप कम्पनी (एमएमजी) मा कार्यरत..
एलपी ग्यासको विकल्पमा 'क्लिक कुक स्टोभ'
बिहीवार, कार्तिक १२, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाले आगोको तापबाट विजुलीसमेत बाल्न सक्ने आधुनिक क्लिन कुक स्टोभ ल्याउने तयारी गरेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण एलपी ग्याँसको अभावले नेपालीको चुल्हो बल्न..
नेपालको ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गोल्ड अवार्ड प्रदान
सोमबार, कार्तिक ९, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी रहेको नेपालको ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.ले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन अध्यक्ष रहेको यो कम्पनीले अर्गानिक खेतीका..
गैरआवासीय विश्व सम्मेलनद्धारा जारी १० बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र यस्तो छ
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरुको शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न सातौं विश्व सम्मेलनले १० बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । “एनआरएनए – पुनः निर्माणको सच्चा साझेदार” नारासहित सम्पन्न..
मैले मेरो उमेर गन्नै छोडिसकेको छुः घले
शुक्रबार, असोज २९, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेष घलेले नेपालीहरुको दुःखमा प्रतिनिधित्व गर्न आफूहरु यहाँ आएको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलन उद्घाटनमा दशैंमा सुट टाई लगाएर एनआरएनहरु..
गैरआवासीय नेपाली संघमा घले भारी मतले पुनः विजयी
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा शेष घले पुनः निर्वाचित भएका छन् । अर्का प्रत्यासी टीवी कार्कीलाई भारी मतले हराउँदै घले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन । संघको बुधबारबाट..
घलेलाई समर्थन गर्दै अध्यक्षका प्रत्यासी झा फिर्ता भए
बिहीवार, असोज २८, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रतन झाले अर्को प्रत्यासी शेष घलेलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी टीबी कार्कीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल..
गैरआवासीय नेपालीको महाधिवेशन आजबाट सुरु
बुद्धबार, असोज २७, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सातौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ । विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकबाट झण्डै एक हजार पाँचसय प्रतिनिधि रहने जनाइएको यो..
अबको १५–२० वर्षमा एनआरएनए बलियो र विश्वसनीय विकास साझेदार हुन्छः शेष घले
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष शेष घलेले अबको १५–२० वर्षमा संघ नेपालको बलियो विकास साझेदार हुने ठोकुवा गरेका छन् । सातौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिन..
भूकम्प पीडितलाई एक हजार घर निर्माण गर्न एनआरएनए र सरकारबीच सम्झौता
आईतवार, असोज २४, २०७२ साल
काठमाडांै । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पा“चवटा जिल्लामा एक हजार स्थायी निजी आवास निर्माणका लागि सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच सम्झौता भएको छ । गैरआवासीय नेपाली दिवस २०१५ को अवसर पारेर आइतबार..
एनआरएनए महासचिवमा तिमिल्सिनाले उम्मेदवारी दिने
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय सल्लाहकार पुष्पराज तिमिल्सिनाले संघको आगामी महाधिवेशनमा महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । स्पेनको बार्सिलोनामा बस्दै आएका उनले नेपालको नयाँ परिस्थितिमा संघको भूमिकालाई पनि नयाँ..
शुक्रबार, असोज २२, २०७२ साल
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी दिने उदेश्यले काठमाडौँको ताहाचालस्थित श्रमग्राममा ‘वैदेशिक रोजगार सुचना तथा परामर्श केन्द्र’मा स्थापना गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र गैरआवासीय नेपाली..
गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनको प्रमुख आथित्यताका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले दशैं अघि सुरु हुन लागेको आवल्नो विश्व सम्मेलनको उदघाटन गर्न राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलाई आग्रह गरेको छ । संघको आउँदो असोज २९ गते काठमाडौंमा हुन..
अघोषित नाकाबन्दीको विरोधमा जापानस्थित भारतीय दूतावासमा बुझाइयो विरोधपत्र
बिहीवार, असोज १४, २०७२ साल
काठमाडौं । नेपालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले भन्सार नाकाहरुमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दी विरुद्ध जापानस्थित भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध जनाइएको छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि दक्षिणी सीमानामा उत्पन्न गतिरोधलाई निशर्त हटाउन..
​न्युयोर्कमा सिंह र मन्त्री पाण्डेको स्वागत
मंगलवार, असोज १२, २०७२ साल
सूर्यचन्द्र बस्नेत न्युयोर्क । राष्ट्रसङ्घको ७०आँै महासभामा भागलिन आएका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई न्यूयोर्कका थुप्रै संस्थाले स्वागत गरेका छन् । कार्यक्रममा सिंहले नेपालको इतिहासमा संविधानसभाबाट पहिलोपटक दुई तिहाइ बढी..
​एनआरएनए आइसीसीका लागि अमेरिकाबाट सात उम्मेदवारी
शुक्रबार, असोज ८, २०७२ साल
अग्नि चौलागाई क्यालिफोर्निया (अमेरिका) । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को असोजमा काठमाडौँमा हुन गइरहेको महाधिवेशनबाट चुनिने नयाँ कार्य समितिका लागि विश्वभरिबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढ्दो छ । दश हजारभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या..
​डिसी मेट्रो क्षेत्रमा नयाँ संविधानको भव्य स्वागत
मंगलवार, असोज ५, २०७२ साल
मनासस । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भर्जिनियाले नयाँ संविधानको स्वागत गरेको छ । भर्जिनिया राज्यमा क्रियाशील विभिन्न नेपाली संस्थाले सिग्नल हिल पार्कमा दीपावली गरेका हुन । नेपाली आकांक्षा अनुसारको संविधान जनताका..
संविधान पारित भएकोमा गैरआवासीय नेपाली खुशी
बिहीवार, भाद्र ३१, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नयाँ संविधान पारित भएकोमा खुशी जनाउँदै अब मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने र आर्थिक संवृद्धिको युग सुरु हुने विश्वास लिएको छ । संघका अध्यक्ष शेष घलेले..
​भूकुम्प पीडितलाई जापानमा रकम संकलन जारी
बुद्धबार, भाद्र ३०, २०७२ साल
टोकियो (जापान) । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने अभियान रोकिएको छैन । हालसम्म ५९ करोड २२ लाख २९ हजार जापानी येन उद्दार कोषमा जम्मा भएको छ । ललितपुर..
​एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा भाँडभैलो
बिहीवार, भाद्र २४, २०७२ साल
प्रकाश पन्थी टोकियो (जापान) । गत आइतबार भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) जापानको मतपरिणाम प्रक्रिया लम्बिएको छ । नयाँ नेतृत्व निष्पक्ष र विवादरहित बनाउन गठित निर्वाचन समितिले घोषणा गरेअनुसार विवाद मिलाउन नसक्दा..
​एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्षमा नवराज रोस्यारा निर्वाचित
मंगलवार, भाद्र २२, २०७२ साल
काठमाडौं । गैरआबासिय नेपाली संघ (एनआररएनए) जर्मनीको अध्यक्षमामा नवराज रोस्यारा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, संघको अन्तरराष्ट्रिय संयोजन समिति सदस्यमा सदस्यमा सुरेन्द्र प्रधान चयन भएका छन । रोस्याहा यसअघि राष्ट्रिय समन्वय..
एनआरएनए विश्व सम्मेलन आयोजक समिति गठन
मंगलवार, भाद्र १५, २०७२ साल
काठमाडौँ । सरकारले सातौं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले केही मन्त्रालयका सचिव र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाको प्रतिनिधित्व..
​एनआरएन बेल्जियमको सचिवमा कँडेलको उम्मेदवारी
बिहीवार, भाद्र १०, २०७२ साल
काठमाडौं । बिगत १६ बर्षदेखि बेल्जियममा रहेका युवा समाजसेवी रमेश कँडेलले गैरआवासीय नेपाली संघ, बेल्जियमको सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । एनआरएनलाई धनीको मात्र नभई सबैको आस्थाको धरोहर बनाउन आफूले उम्मेदवारी..
Results 136: You are at page4of 5